Jizọs Akụziere Nikọdimọs Ihe ‘Ịmụ Mmadụ Ọzọ’ Pụtara | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
JIZỌS NA NIKỌDIMỌS AKPARỊTA ỤKA
IHE ‘ỊMỤ MMADỤ ỌZỌ’ PỤTARA
Ka Jizọs nọ na Jeruselem maka Ememme Ngabiga nke afọ 30, ọ rụrụ ọtụtụ ọrụ ebube. N’ihi ya, ọtụtụ ndị kweere na ya. Ihe Jizọs na-eme tọkwara otu nwoke aha ya bụ Nikọdimọs ụtọ. Ọ bụ onye Farisii, sorokwa n’òtù ụlọikpe ka elu nke ndị Juu a na-akpọ Sanhedrin. Nwoke a chọrọ ịmụtakwu ihe n’ọnụ Jizọs. N’ihi ya, ọ gakwuuru Jizọs n’abalị. Ọ ga-abụ na ihe mere o ji gakwuru ya n’abalị bụ n’ihi na ọ na-atụ ụjọ na ọ bụrụ na ndị ndú okpukpe ndị Juu ndị ọzọ ahụ ya, ha ga-akwụsị ịkwanyere ya ùgwù.
Ọ sịrị Jizọs: “Rabaị, anyị maara na ị bụ onye ozizi nke si n’ebe Chineke nọ bịa; n’ihi na ọ dịghị onye pụrụ ime ihe ịrịba ama ndị a ị na-eme ma ọ bụrụ na Chineke anọnyereghị ya.” Jizọs gwara ya na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịba n’Alaeze Chineke, ‘a ga-amụrịrị onye ahụ ọzọ.’—Jọn 3:2, 3.
Oleekwanụ otú a ga-esi mụọ mmadụ ọzọ? Nikọdimọs jụrụ ya, sị: “Ọ̀ pụrụ ịbanye n’afọ nne ya nke ugboro abụọ ka a mụọ ya?”—Jọn 3:4.
Mba, ọ bụghị ihe ịmụ mmadụ ọzọ pụtara. Jizọs kọwaara ya ihe ọ pụtara. Ọ sịrị ya: “Ọ bụrụ na a mụghị mmadụ site na mmiri na mmụọ nsọ, ọ pụghị ịbanye n’alaeze Chineke.” (Jọn 3:5) Ọ bụ mgbe e mechara Jizọs baptizim, mmụọ nsọ adakwasịkwa ya, ka a mụrụ ya “site na mmiri na mmụọ nsọ.” Mgbe ihe a mere, e nwere olu si n’eluigwe kwuo, sị: “Onye a bụ Ọkpara m, onye m hụrụ n’anya, onye ihe ya masịrị m.” (Matiu 3:16, 17) Chineke si otú a mee ka a mara na ya ezitela Jizọs dị ka nwa ime mmụọ nke nwere olileanya ịba n’Alaeze eluigwe. Ka oge na-aga, na Pentikọst afọ 33, a ga-awụsa ndị ọzọ e mere baptizim mmụọ nsọ, si otú ahụ mụọ ha ọzọ, ha aghọzie ụmụ Chineke e ji mmụọ nsọ tee mmanụ.—Ọrụ Ndịozi 2:1-4.
O siiri Nikọdimọs ike ịghọta ihe Jizọs na-akụziri ya banyere Alaeze Chineke. N’ihi ya, Jizọs kọwakwuuru ya gbasara ọrụ pụrụ iche ya na-arụ dị ka nwa Chineke. Jizọs sịrị: “Dịkwa nnọọ ka Mozis weliri agwọ elu n’ala ịkpa, otú ahụ ka a na-aghaghị iweli Nwa nke mmadụ elu, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee nwee ndụ ebighị ebi.”—Jọn 3:14, 15.
Ndị Izrel ahụ agwọ ọjọọ tara ogologo oge gara aga lere agwọ ọla kọpa ahụ anya ka ha nwee ike ịdị ndụ. (Ọnụ Ọgụgụ 21:9) Otú ahụkwa ka ụmụ mmadụ niile kwesịrị inwe okwukwe n’Ọkpara Chineke ka ha ghara ịnọgide na-anwụ anwụ, nwezie ike ịdị ndụ ebighị ebi. Jizọs gwaziri ya ihe Jehova mere iji mee ka ihe a kwe omume. Ọ sịrị ya: “Chineke hụrụ ụwa n’anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka e wee ghara ibibi onye ọ bụla nke nwere okwukwe na ya, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.” (Jọn 3:16) Ọ bụ ya mere na n’ọnwa isii Jizọs bidochara ozi ya, ọ gwara Nikọdimọs na ọ bụ ya ka Jehova ga-esi n’aka ya zọpụta ụmụ mmadụ.
Jizọs gwara Nikọdimọs, sị: “Chineke zitere Ọkpara ya n’ụwa, ọ bụghị ka o kpee ụwa ikpe.” Ihe nke a pụtara bụ na e ziteghị ya ka ọ maa ụwa niile ikpe mbibi. Kama, dị ka Jizọs kwuru, e zitere ya ka ‘e si n’aka ya zọpụta ụwa.’—Jọn 3:17.
Ọ bụ ụjọ mere Nikọdimọs ji gakwuru Jizọs n’abalị. N’ihi ya, ọ dị mma na ihe Jizọs ji mechie mkparịta ụka ahụ bụ: “Nke a bụ ihe a ga-eji kpee ikpe, na ìhè ahụ abịawo n’ụwa ma ụmụ mmadụ hụrụ ọchịchịrị n’anya kama ìhè, n’ihi na ọrụ ha dị njọ. N’ihi na onye na-eme ihe ọjọọ kpọrọ ìhè ahụ asị, ọ dịghịkwa abịa n’ìhè ahụ, ka e wee ghara ịkatọ ọrụ ya. Ma onye na-eme ezi ihe na-abịa n’ìhè ahụ, ka e wee mee ka ọrụ ya pụta ìhè na a rụrụ ha dị ka uche Chineke si dị.”—Jọn 3:19-21.
Ugbu a, ọ bụzi Nikọdimọs, bụ́ onye Farisii na onye nkụzi Izrel, ka ọ dịịrị icheba echiche n’ihe ndị ọ nụrụ banyere ihe Jizọs ga-eme iji mezuo nzube Chineke.
Gịnị mere Nikọdimọs ji gakwuru Jizọs, gịnịkwa mere o ji gaa n’abalị?
Gịnị ka ‘ịmụ mmadụ ọzọ’ pụtara?
Olee otú o si bụrụ na Jizọs abịaghị ‘ikpe ụwa ikpe’?
Gụọ ihe isii Baịbụl kwuru gosiri na ọnwụ otu onye ga-emeli ka ọtụtụ ndị mmadụ dị ndụ ebighị ebi.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jizọs Akụziere Nikọdimọs Ihe n’Abalị
jy isi 17 p. 44-45